Nepali News blog
५ कात्ति, काठमाडौं । शुक्रबार न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा भएको बाँडफँटमा २ लाख ९ हजार २५० जनाले हाइड्रोपावरको शेयर पाएका छन् ।
आईपीओमा २२ लाख ५५ हजार ८४ जनाले २ अर्ब ७० करोड ८९ लाख १५ हजार रूपैयाँ बराबरको गरेका थिए । जसमा १० हजार ४४२ आवेदन रद्द भएको थियो भने ३ हजार ५०४ आवेदन सिआस्वा प्रणालीले अस्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत भएका २२ लाख ४१ हजार १३८ आवेदनमा आईपीओे बाँडफाँट गरिएको हो ।
कम्पनीले असोज १५ गते देखि १९ गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको थियो । जसमध्ये ४५ हजार कित्ता शेयर कम्पनीको कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको २० लाख ९२ हजार ५०० कित्ता शेयर सर्वसाधारणकालागि वितरण गरिएको थियो ।
from Online Khabar https://ift.tt/3mbgLd7
Labels: Online Khabar
नोर्दर्न ह्वाइट गैँडाः जम्मा दुईवटा पोथी बाँकी भएको दुर्लभ जातको अफ्रिकी गैँडामध्ये एकलाई प्रजनन योजनाबाट बिदा
बायोरेस्क्यू नामक वैज्ञानिक समूहका अनुसार नाजिनबाट थप डिम्ब सङ्कलन नगर्ने निर्णय गर्नुअघि विभिन्न जोखिम आकलन गरिएको थियो।
from BBC News नेपाल - समाचार https://ift.tt/3b2sjbX
Labels: BBC News नेपाल - समाचार
from Online Khabar https://ift.tt/3DZfGLg
५ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनद्वारा ताइवानमाथि आक्रमण भएको खण्डमा अमेरिकाले सुरक्षा गर्ने बताएका छन् ।
एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बाइडेनले ताइवानको रक्षा गर्ने बताएका हुन् । ‘अवश्य पनि उक्त कार्य गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो’, अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै बाइडेनले भने ।
बाइडेनको पछिल्लो अभिव्यक्ति अमेरिकाले लामो समयदेखि लिँदै आएको नीतिसँग मेल खाँदैन । तर उनको अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तनको रुपमा बुझ्न नहुने ह्वाइट हाउसका एक प्रवक्ताले प्रस्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै, बाइडेनले चीनसँग जानीजानी हुने द्धन्द्धबाट आफू चिन्तित नहुने समेत बताएका छन् । अमेरिका विश्व इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्ति हो भन्ने सबैलाई थाहा भएको र चीन थप शक्तिशाली हुने कुराबाट चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ थियो ।
ताइवानको सुरक्षासम्बन्धी पेचिलो मुद्दामा अमेरिकाले लामो समयदेखि ‘रणनीतिक अस्पष्टता’को नीति लिँदै आएको छ । यसको अर्थ चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा आफूले चाल्ने कदमबारे अमेरिका जानीजानी अस्पष्ट छ भन्ने हो ।
चीनले ताइवानलाई आफूबाट छुट्टिएको एक प्रान्त ठान्छ र आवश्यक परे बलपूर्वक आफूमा गाभ्न सक्ने बताउँदै आएको छ । तर ताइवानले भने आफू स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
ताइवानसँग अमेरिकाको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध छैन । यद्यपि, ताइवान सम्बन्ध ऐनअन्तर्गत अमेरिकाले ताइवानको सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ र सोही प्रावधानबमोजिम हतियार बिक्री गर्दै आएको छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/3b1PrYk
निर्देशक रामबाबु गुरुङको सफल सिरिज चलचित्र ‘कबड्डी’को चौथो श्रृङ्खलाको छायांकन मुस्ताङबाट सुरु हुने भएको छ । यो चलचित्रको छायांकनका लागि निर्देशक गुरुङ सहितको टोली ३ दिन अगाडि मुस्ताङ पुगेको थियो । यस्तै, चलचित्रका कलाकार र प्राविधिक टोली बिहिबार मुस्ताङतर्फ प्रस्थान गरेको छ ।
मुस्ताङमा रहेका निर्देशक गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने–‘यसपटक हामीले ३५ दिनको सेड्यूल नै मुस्ताङमा छायांकन गर्दैछौ । म लगायत केही टोली ३ दिनदेखि यतै छ । कलाकारसहितको बाँकी टोली आज आइपुग्छ । तयारी अनुसार काम गर्न सकियो भने भोलीबाट हामी छायांकन सुरु गर्नेछौं ।’
मणिराम पोखरेल निर्माता रहेको यो चलचित्रमा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विजय बराल, बुद्दि तामाङ, मिरुना मगर, गौमाया यात्री, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, जयनन्द लामा लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ ।
निर्देशक गुरुङले सबै कुरा मिल्यो भने आफूले चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि चाडै तय गर्ने बताए । उनले भने–‘कोरोनाको तेश्रो भेरियन्ट आएन भने हामी यसपटक चलचित्र रिलिजका लागि प्रतिक्षा गर्ने सोचमा छैनौं ।’ रामबाबुले यो चलचित्रलाई ‘कबड्डी ४’ सिरिजको फाइनल गेम भनेका छन् ।
from Online Khabar https://ift.tt/3C6WD1d
यो पनि पढ्नुहोस ‘पारिवारिक विग्रह रोक्न तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्छ’ यो पनि पढ्नुहोस ‘आपसी विश्वासको अभावले परिवारमा विघटन आउँदैछ’
from Online Khabar https://ift.tt/3C7psKH
कुनै पनि सामाजिक सम्बन्ध; चाहे त्यो व्यावसायिक होस् वा श्रीमान्–श्रीमती बीचको, त्यसमा दुई वटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छन्— आपसी सम्मान र विश्वास अनि यौन ।
आपसी सम्मान र विश्वासको कमी भएपछि सम्बन्ध सधैं तनावपूर्ण हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धविच्छेदको देखिने कारण मात्रै हो, वास्तविक कारण परिवारबीचको आपसी सम्बन्ध र विश्वासमा भएको अभाव हो ।
त्यसैगरी यौन सम्बन्ध अर्को कारण हो । यौन एउटा जैविक आवश्यकता हो । जसरी मानिसलाई गाँस, बास र आवास चाहिन्छ त्यसरी नै यौन पनि जैविक आवश्यकता हो । यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वैदेशिक रोजगारीको प्रयोजनका लागि वर्षाैंसम्म छुट्टिएर बस्नुपर्ने भएपछि त्यस अवस्थामा यौन चाहनाले विचलन ल्याउन सक्छ ।
यो महिला र पुरुष दुवैमा देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरू आउँदा विभिन्न यौन रोग लिएर आएका घटना पनि छन् । आपसी सम्मान र विश्वास भयो भने श्रीमान्–श्रीमती सँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । जहाँ भए पनि सम्बन्ध सुमधुर रहन्छ । तर, सँगै बस्दा पनि विश्वास भएन भने सम्बन्ध बलियो रहन्न ।
विचलन ल्याउने काम निश्चय नै वैदेशिक रोजगारीले गरेको छ । सामाजिक विग्रह र परिवार विघटन रोक्न राज्यले रोजगारीसँगै सामाजिक चेतना विकास गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ
केही दिनअघि म नोबल मेडिकल कलेजमा डाक्टर रामहरि घिमिरेलाई भेट्न जाँदा थुप्रै महिला बिरामी आउनुभएको थियो । करीब आधा घण्टा जति बसें होला त्यहाँ, त्यसबेला आउने अधिकांश बिरामीलाई डाक्टरसाबले मानसिक परामर्शका लागि पठाउनुभयो । समस्या सबैको साझा थियो, श्रीमान् विदेशमा थिए ।
श्रीमान् वा श्रीमती विदेशमा रहँदा दुई वटा कुराको तनाव रहन्छ । पहिलो मिल्ने मान्छे आफूसँग छैन, अनि जैविक आवश्यकता पूरा भएको छैन । अर्काे कुरा घर व्यवहारको तनाव छ । विवाह गरेर आएकी महिलालाई छोरी सरहको व्यवहार गरेको त भन्छौं तर त्यहाँ नदेखिने तनाव हुँदोरहेछ । जसले गर्दा त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या देखिने गरेको डाक्टर घिमिरेले बताउनुभयो ।
मानिस एउटा समझदारीमा विदेश गएको हुन्छ । दुई वर्षमा फर्कने समझदारी हुँदा किन धैर्य रहेन ? मेरो विचारमा त्यसको विचलनको पछाडि इन्टरनेट प्रविधिसँगको पहुँच र भौतिक जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन नै हो ।
आर्थिक हैसियत बढेपछि मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउँछ । चाहनाहरू बढ्छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि विचलन धेरै हुन्छन् । सुनसरीमा मैले अध्ययन गर्दा केही परिवारमा श्रीमान्ले पैसा कमाएर ल्याएपछि श्रमतीलाई गरेको दुव्र्यवहारले पनि सम्बन्धविच्छेदसम्म पुगेको देखेको थिएँ । विवाह हुँदा समान आर्थिक हैसियत भए पनि पछि लोग्नेले पैसा कमाएपछि श्रीमतीमाथि दुव्र्यवहार भएको पनि देखियो । अर्थात् सम्पन्नताले पनि मानिसमा विचलन ल्याउँदो रहेछ ।
तर यसो भनेर वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षलाई बिर्सनुहुन्न । समाजमा धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन् । श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको पैसाले श्रीमतीले व्यवसाय गरेका छन् । छोराछोरी पढाएका छन् । आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त गरेका सफलताका कथा पनि धेरै छन् ।
समग्र वैदेशिक रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यसबाट आएको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अति न्यून छ । भौतिक सामग्री खरीदमा विदेशको पैसा खर्च भएको छ । यसलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएको छैन ।
व्यक्तिसँग नगद भएपछि गलत कामका लागि पनि आँट आउन सक्छ । जैविक आवश्यकता हुँदा विकल्पहरू प्रयोग गर्न नसक्ने, चाहनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थाले पारिवारिक विघटन भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
अतिरिक्त आय, सम्पन्नता, यौन सन्तुष्टि परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थाले मानिसमा विचलन ल्याउँछ । यसमा महिलालाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन, पुरुष पनि उत्तिकै दोषी छन् । यौनप्रतिको हाम्रो बुझाइ, यौन व्यवहारमा भएका बन्धन जिम्मेवार छन् ।
परिवारको विघटनले हाम्रो समाजमा नकारात्मक असर गर्छ । समाज र संस्कृति सँगसँगै जाने विषय हो । जुन कुरा संस्कृतिले अपनाउँदैन त्यो कुरा समाजमा गर्न मिल्दैन । हाम्रोमा विवाह र शारीरिक सम्बन्ध सामाजिक रूपमा स्वीकृत व्यक्तिहरूबीच मात्रै हुन्छ । आजको यो विचलनले भोलिका दिनमा समाजमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ । पश्चिमा मुलुकको जस्तो संस्कृति भए ठूलो प्रभाव पर्दैनथ्यो होला ।
सामाजिक विकृति रोक्न राज्यले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना भयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था नै रहँदैन । सामाजिक चेतनास्तर पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि त्यहाँबाट प्राप्त आम्दानी कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा समाजमा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु राज्यका लागि पनि नोक्सानको विषय हो ।
आर्थिक हैसियत बढेपछि मानिसको आवश्यकता बढ्छ । जीवनशैली परिवर्तन हन्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि यस्ता विचलन पनि धेरै हुन्छन् । यो विचलन ल्याउने काम निश्चय नै वैदेशिक रोजगारीले गरेको छ । सामाजिक विग्रह र परिवार विघटन रोक्न राज्यले रोजगारीसँगै सामाजिक चेतना विकास गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ ।
(महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत समाजशास्त्री उपाध्यायसँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
from Online Khabar https://ift.tt/3jKeaVV
BBC News नेपाल - समाचार
आखिर ३३ केजी सुन कहाँ पुग्यो
समाचार – Hulaki News
October 2021 (491)
May 2019 (2623)
March 2019 (2711)
January 2019 (2630)
October 2018 (2481)
September 2018 (2674)
August 2018 (2685)
Technical Guruji Np
५ कात्ति, काठमाडौं । शुक्रबार न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क...
बेलारुस चुनाव: शक्तिमा रहेका पुरुषविरुद्ध लड्न राजनीतिक मतभेद छाडेर महिलाहरू एक
बेलारुसमा २६ वर्षदेखि शासन गरिरेहका राष्ट्रपतिविरुद्ध तीन फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका महिलाहरू किन एक साथ उभिए? from BBC News नेपाल - समाचार ...
यस्तो छ छिटो र मिठो पकाउने विधि
तपाईं भान्साको काममा कति रमाउनुहुन्छ ? खाना बनाउन जाँगर चल्छ ? कति थरीका खानेकुरा बनाउनल सक्नुहुन्छ ? तपाईं भन्नुहोला, ‘खाना पकाउने रहर त ल...
पककला : स्वादिलो र पोषिलो पनि
खानाबाट आनन्द लिन, स्वादको अनुभव गर्न र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन पाककला महत्वपूर्ण छ । सामान्य लाग्छ, तर पाककला हाम्रो स्वास्थ्य र स्वादसँग ...
२२ पुस, सिमकोट । हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढेसँगै यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । हुम्ला उच्च हिमाली जिल्ला भएकाले भारी हिमपातपछि सदरमु...
८ फागुन, काठमाडौं । राराको सौन्दर्यमा रमाउन हिँडेका केही यात्रीहरु दैलेखको तल्लो ढुंगेश्वरको लहरेपुलमा पुग्दै थिए, एक हुल बालक पुल नजिकैको ज...
टोखा सडकमा टेक्नै मुस्किल !
१४ असार, काठमाडौं । उपत्यकामा पछिल्लो समय नयाँ बस्तीका रुपमा विकास भएको छ, टोखा क्षेत्र । विद्यालयदेखि ठूलो अस्पताल पनि खुलेका छन् । ग्राण्ड...
कोरोना भाइरसको संक्रमण थपिने क्रम जारी थियो । जेठको मध्यतिर स्याङ्जाको एक क्वारेन्टिनमा नियमित गर्जाेको झोल खुवाउन थालियो । नेपाल सरकारको आय...
निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएका कारण जोर्जिया राज्यले पुनः मतगणना गरिने गत हप्ता नै जानकारी गराएको थियो। from BBC News नेपाल - समाचार https:...
१३ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता गोकर्ण विष्टले पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म प्रयासरत रहेको बताएका छन् । बिहीबार नेता बिष्टले ट्वी...
२ असार, बुटवल । अबिरल वर्षका कारण राप्ती नदीमा आएको बाढीमा फसेका चार जनाको प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ । लमही नगरपालिका-७ का ४८ वर्षीय मन...